Ukusetshenziswa Kwamakhamera Omzimba Ozelwe Yizimboni | Izixazululo ze-OMG
Ukusetshenziswa kwamakhamera omzimba owenziwa yizimboni ezifana Nezokuhweba Esisonke, Ukuhweba Ngezitolo, Ezezimali, Umshuwalense, Ezolimo, Ezokwakha, Ezokukhiqiza Izimayini, Ezokuhamba, Ezokuxhumana, Ezikagesi, Ezigesi, Ezokuhlanza, kanye Nezinsiza Zezindlu. Le mikhakha isiqalile ukuhlomisa abasebenzi bezokuphepha ngamakhamera agqokwa ngomzimba ngenhloso yokuvikela ibhizinisi labo ekuhlukunyezweni nasekuhlaselweni wumphakathi.
Ucwaningo ngokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba athi kunomehluko omkhulu ngemuva nangezibalo zokuhlukunyezwa, udlame nokusongelwa kulezo zimboni ezingaphezulu. Abaphathi abaningi basikisela ikhamera egqokwa ngumzimba njengedivaysi eyakhayo eye yaxazulula izinkinga zabo eziningi. Lapha sixoxa ngokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba yizimboni emigqeni elandelayo:
Isitolo esidayisa yonke impahla kanye nokuthengisa:
Ukusebenza kwamakhamera agqokwa uMzimba njengobuchwepheshe bokuphoqelela umthetho kubalulekile ngokulinganayo kubasebenzi bezokuphepha abathengile nabezitolo. Izitolo ezinjengeWal-Mart's UK ziqale ukuhlinzeka onogada ngamakhamera agqokwa ngomzimba ukuzama ukuvikela ibhizinisi labo ekuhlukunyezweni nasekuhlaselweni ngumphakathi.
Unobhala Jikelele Wenyunyana Yezitolo, Ukusabalalisa Nabahlanganyeli eManchester, uPaddy Lillis uthi ngokungangabazeki, amakhamera agqokwa ngomzimba anezinto ezivimbelayo futhi asekela kakhulu lezo zinyathelo zigxile ekwehliseni izinsongo, udlame kanye nokuhlukumezeka emsebenzini.
I-USDAW iphawula ukuthi inhlolokhono yabalingani bezitolo isho ukwanda kwama-25% odlame nokuhlaselwa okungaphezu kwe-230 kubasebenzi bezitolo ezingama-United Kingdom.
Omunye umthengisi wekhamera ubona umehluko omncane phakathi kokusetshenziswa kwamakhamera womzimba ekusebenzeni komthetho nokuphepha kwezokuphepha. Inhloso eyisisekelo yamakhamera agqokwa ngumzimba ukunciphisa udlame olubhekiswe kulowo ofaka ikhamera, anikeze ubufakazi bokuxhumana okuthathiwe ukuze avumelane noma aphikise noma yiziphi izinsolo futhi anikeze umbono ongashayi eceleni futhi ofanelekile wesigameko.
Amakhamera agqokwa ngomzimba ayisinyathelo esisodwa ngaphambi kwamakhamera we-CCTV ngoba owokugcina awunawo umsindo. Amakhamera agqokwa ngomzimba anikeza ukwesekwa okungeziwe namandla okuqoqa ubufakazi ngoba afaka umsindo kanye nevidiyo.
Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba emabhizinisini kufaka phakathi abathengisi, izibhedlela, ezemidlalo, nezindawo zokuzijabulisa akuzange kube ukuhamba okuningi ekwamukelweni kwawo. U-Read Hayes, usosayensi wokucwaninga e-University of Florida uthi uyazi izitolo e-United States of America ezisebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kepha uyenqaba ukudalula amagama ezinkampani.
Iqembu likaHayes njengamanje lisebenzisana nomthengisi ukuthuthukisa isivivinyo lapho abasebenzi bezindawo zokupaka njengabaqaphi bezokuphepha nabaqoqi bezimoto befakwe ngamakhamera agqokwa ngomzimba ezitolo ezikhethiwe. Kuzohlaziywa maqondana nabalingisi abangagqokile kwikhamera ezitolo ezifana nezindawo ezinendawo yokuhlala kanye nezisekelo zamakhasimende, ukuqhathanisa izici ukuthi abasebenzi bavame ukucelwa usizo noma ulwazi, isibalo sezikhalazo kanye nezimo zokungaboni ngaso linye. UHayes uthi kumele kwenziwe lo msebenzi ezinyangeni ezintathu ukuya kweziyisithupha ezizayo.
Ukufingqa, ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kukhombisile kuwusizo ekwehliseni udlame lweminyaka embalwa edlule. Indawo yokupaka izisebenzi eScotland ibigqoke amakhamera agibele phezulu. Ekupheleni kocwaningo, kuye kwafakazelwa ukuthi izisebenzi ezinekhamera egqoke umzimba zivezwa ukuphathwa kabi okuncane okuvela emphakathini. Ngokufanayo, eCity Center Management eBelfast, eNyakatho Ireland, kwenziwa okunye ukuhlola ezindaweni eziphambili zokuthengisa futhi ngenxa yalokho kwehla i-43% ekwebiweni kwezitolo. Le miphumela ikhombisa ukuthi amakhamera agqokwa uMzimba aletha ushintsho olukhulu ekwehliseni nodlame.
Ukusebenza kwamakhamera agqokwa uMzimba njengobuchwepheshe bokubheka kubalulekile kumafomu ezolimo nabaqaphi bezingadi ukubheka ukweba nabenzi bokubi. Izithelo zivame ukusongela amasela azama ukweba izithelo. Unkosikazi Patricia Corcoran ungumnikazi wezithelo zemifino eCarlifonia. Unikeze ikhamera egqoke umzimba onogada bayo ngoba bekhathazekile ngokweba. Hhayi amakhamera agqokwa ngomzimba kuphela ahlonze amasela kodwa futhi ahlola nokweba ezivandeni zakhe.
Kuyasiza futhi ukubheka abasebenza epulazini ngoba amakhamera we-CCTV awakwazi ukuqopha umsindo ngenkathi ikhamera egqoke umzimba ingabamba umsindo kanye nevidiyo. Kungenzeka ukuthi abasebenza emapulazini bangabandakanyeka ekwebiweni nakwezinye izinto ezimbi ezenziwayo. Uma umuntu ophambukayo ezama ukungena engadini yezolimo noma epulazini lezolimo futhi azame ukweba noma ukulimaza, abakwa-camera abedonsa umzimba bekhamera bangabona lowo osonile.
Ucwaningo olususelwa emibonweni yabalimi nabalimi lukhombisa ukuthi ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kwehlise amaphesenti ezigameko ezingekho semthethweni emapulazini nasezivandeni zezolimo.
Unkosikazi Patricia Corcoran uqinisa ukusebenza kwamakhamera agqokwa ngumzimba ekunikezeni imiphumela efiselekayo ngoba wayekhathazekile ngokwanele ngenkinga yokuphanga ezivandeni zakhe. Ucebisa abanye abalimi ukuthi basebenzise ikhamera egqoke umzimba ukubeka iso emisebenzini yabasebenza emapulazini nokubheka ukweba.
Izimayini ziyimboni eyingozi kakhulu futhi izingane zihlangabezana nobunzima obuningi ngesikhathi sokwenza imisebenzi yazo futhi ngezinye izikhathi izimpilo zazo ziba sengozini. Ngokufanayo, izinkampani zezimayini zibhekana nobungozi obukhulu bokuphepha okungabukelwa phansi kokubhekwa kwamavidiyo okuthembekile. Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba kunciphisa ubungozi bokuphepha embonini yezimayini.
Ukuphepha Kwekhamera Yezimayini kuyasiza ngezindlela ezilandelayo:
* Kuqinisekisa ukuthi abasebenzi balandela imigomo yokuphepha
* Kugwema ukweba kanye nokusaphazeka
* Abaqaphi abalawula imfucuza
* Ivimbela abephula umthetho nabantu abangagunyaziwe ekutholeni ukufinyelela
* Ivumela ukubukwa kweselula kokugcina iso
* Ibamba ukwephulwa kwemithetho yokuphepha nokuphepha
* Inikeza isithombe esicacile sesayithi lezimayini
* Qapha izizathu zezingozi zezimayini
Sonke sizwa futhi sikholelwa ngokweqiniso ukuthi ukuphepha kubalulekile. Emkhakheni Wezokwakha Yezimboni ukuphepha komuntu kubalulekile. Uphenyo ngezokuphepha embonini yezokwakha luthatha isikhathi esiningi futhi luvame kakhulu kuncike ekutholeni imininingwane eqondile evela kubasebenzi noma ngabe bayazibandakanya noma bafakaze ezenzakalweni ezenzeka esizeni. Omunye wabangani bethu ungitshele ukuthi inkampani yakhe yenza ucwaningo lwe-Use of Body Camera ukwakha. Kwakuyiqembu elincane labasebenzi kusuka ku-5 kuya kubantu be-10. Inhloso yalolucwaningo bekuwukuthola amaqiniso nezibalo mayelana nezehlakalo ezahlukahlukene ezenzeka eMkhakheni Wokwakha. Le nkampani izoba nobufakazi besisebenzi kanye nemininingwane ye-audio / video mayelana nokwenzekile kuwo wonke umsebenzi wokwakha isakhiwo.
Izinkampani zokwakha azivamile ukuhlela izivivinyo ezinjalo. Isilingo esishiwo ngenhla sithele kakhulu ukuthola amava nokuthatha izinyathelo zokuphepha eziningi. Lokhu kuvula ibhokisi lemibuzo likaPandora kumawebhusayithi wezinyunyana alawula ukuthwebula izithombe namavidiyo wabasebenzi futhi kunomthelela kumalungelo abasebenzi adinga ukubhekelwa. Lolu cwaningo lwabasebenzi abayisi-5 kuya kwabangu-10 enkampanini yokwakha lukhombisa ukuthi Ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwe umzimba kusiza kakhulu embonini yezokwakha. Ngokusebenzisa ama-BWC, singabona izinxushunxushu ezibeka engcupheni ukuphepha kwabasebenzi bezokwakha.
Amakhamera agqokwa ngomzimba anendima ebalulekile yokuqapha isitshalo sakho sokukhiqiza. Ukwazi ukubona isitolo sakho noma isitshalo sokukhiqiza kuhamba ibanga elide lapho ukuphepha kuyinkinga. Uma ubheka isitshalo sakho sokukhiqiza kungenzeka ukuthi sikhulise ukusebenza kwawo ngoba uhlala ngaphansi kokubhekwa kwakho ngaso sonke isikhathi. Ukunikeza amakhamera omzimba kubasebenzi bezitshalo zakho zokukhiqiza kungavimba ukweba kanye namanye amacala. Ungahlola umonakalo nokunye okulahlekile ngokubhekwa kwekhamera okugqokwa ngumzimba. Lapho umuntu azi ukuthi ungaphansi kokubhekwa kwamakhamera uyakugwema ukwenza ubugebengu. Ngaphezu kwalokho, ngamakhamera wencazelo ephezulu, noma umuntu ezama ukwenza ubugebengu ngaphakathi kwesitshalo sokukhiqiza, angabamba yonke imisebenzi yakhe. Ngokuhlanganisa i-24 / 7, uzohlala wazi ukuthi kwenzekani endaweni yakho, kufaka nezindawo eziningi nganoma yisiphi isikhathi.
Ngokujikeleza iwashi, ungabona ukuthi ngabe ukulahleka okuhlobene nomsebenzi kwakubangelwa ukunganaki okuphathelene nomsebenzi, ukungazilandeli imigomo, imishini enephutha, njalonjalo. Noma wonke umuntu efektri yakho eqaphela kakhulu i-100% yesikhathi, izingozi zingahle zenzeke, futhi ukuba namakhamera okuphepha ekholini lomsebenzi wakho wefektri ngeke kukulethele ukuthula kwengqondo kuphela kepha kuzonciphisa nezindleko zomshuwalense.
Lapho abasebenzi nabasebenzi bezokuphepha esakhiweni sokukhiqiza sale fektri bengaphansi kokubhekwa kwamakhamera agqokwa ngumzimba, bazozama ukwenza kangcono. Ngale ndlela, ungathuthukisa ukusebenza nokusebenza kahle kwesitshalo sokukhiqiza efektri yakho.
UCollin Green, Umphathi Wezokuphepha Kwesitimela esiseNingizimu, e-United Kingdom waqaphela isidingo sokuthola ithuluzi elizosebenza njengesithikamezo kanye nesidingo sokuqoqa ubufakazi lapho ususuka ekushintsheni. Ngale njongo, wenza ucwaningo futhi wathola abezindaba ababenomsebenzi esasiwufuna. Uthole amakhamera agqokwa uMzimba ewusizo kakhulu emnyangweni wakhe. Ubize ukuthi kusizakale kakhulu ukuqapha imisebenzi emnyangweni wabo. Ngenkathi uMnu Colin Green ethatha izintambo zehhovisi leMenenja Yezokuphepha yeSouthern Railway, i-United Kingdom yaphatha iqembu lezikhulu ze Rail Neighborhood ezasebenza ezitimeleni naseziteshini eziseduzane neNgilandi. UMnu Colin ubheka ukuthi kungenzeka yini ukuthi kuthengwe amanye amakhamera we-Reveal Body -igqoke ngokuzayo ukwenza amathuluzi abe yindaba yomuntu siqu.
Ukuxhaswa ngemali kwakubalulekile kusuka kojantshi be-network kumakhamera kwasekuqaleni. Baqale ukusebenzisa amakhamera ku-Railway.
Yimuphi umehluko amakhamera agqokwa uMzimba aletha isitimela?
Ukubonakala kukhuphukile ngamakhamera. Abasebenzi bezokuphepha eSouthern Railway bagqoke amajackethi afana nejazi lamaphoyisa alingene. Kwesinye isikhathi, zingaba inselelo lapho ubhekana nabantu abanolaka noma udakiwe. Baye babona umehluko ekuziphatheni kwabantu ngoba lapho abantu abaningi bezwa ikhamera ikuku bagwema ukuphathwa kabi. Isikhathi sokuqala basebenzise i-video njengobufakazi lapho bekhombisa umuntu othintekayo ividiyo, benecala benecala, bathola inhlawulo yokuthola inhlawulo.
In inkathi yamanje yobuchwepheshe bedijithali, izinhlangano zokuxhumana, njenge-AT & T, T-Mobile, Verizon Communications, Charter Communications, njll e-United States of America zidinga ukuqashwa kwekhamera ukuze zithuthukise ukusebenza kwazo kahle. Yize ikhamera ye-CCTV ibaluleke kakhulu kepha ingabamba umsindo futhi inikeze ukubhekwa kwevidiyo kuphela ngenkathi amakhamera agqoke umzimba anendawo yawo ekubukeni kokuphepha. Banikezela ngesistimu yokubhekwa kwevidiyo ephezulu ngokuqoshwa komsindo nevidiyo. Ukugcina lamaqiniso kubukwa izinkampani ezinjengeCharter Communication, i-AT & T, iVerizon Communications, njll. Zifuna ukukhulisa amandla okuphepha amabhizinisi abo ngokunikeza amakhamera agqoke umzimba kubasebenzi babo bezokuphepha.
IMobilink yinkampani edumile yezokuxhumana ePakistan. Isigameko sokweba senzeke e-Faisalabad franchise yaso. Umuntu ubambe amakhebuli kepha abezokuphepha abakwazanga ukunikeza ubufakazi ngoba babengenamakhamera agqokwa ngomzimba. Lesi sibonelo sibonisa ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba abaluleke kangakanani ezinkampanini zokuxhumana.
Amandla ukufaka kuyingozi kakhulu ngoba ngisho nokungakhathaleli okuncane kungenza impilo ibe yodwa. Ukusebenza kwamakhamera agqokwa uMzimba njengobuchwepheshe bokubhekisisa nakho kubalulekile emnyangweni kagesi.
Izinzuzo Zokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba enkampanini kagesi:
Khawulela abasebenzi ukuthi bathobele imithetho yezokuphepha ngezikhathi zabo zokusebenza ngoba ukungakhathalelwa okuncane ngabasebenzi kubenzakalisa kakhulu. Ukuhlola isehlakalo esingathi sína kubalulekile ukulalela yonke imithetho yezokuphepha nemigomo.
Gcina abagwebayo nabantu abangagunyaziwe kude nomthetho wenkampani kagesi hhayi ukubheka ukulimala kuphela kepha futhi ubavikele ekufakweni kukagesi okuyingozi.
Gada abasebenzi ukuthi ngabe bayayilandela yini imithetho yenkampani noma cha
Qaphela ukukhohlisa kwezinto ezingcolile
Gwema ukweba nokucekela phansi
Bheka izinto zokuchitha
Vumela ukubukwa kweselula kokubeka iso kusayithi
Gada izimbangela zezingozi kanye nokunye ukulahleka
Abaningi Izindlela zobuchwepheshe zishayela imakethe yegesi neyela kawoyela. U-Exxon Mobil inkampani ehamba phambili kawoyela negesi e-United States of America unikeze amakhamera agqokwa ngomzimba kwabaphethe kanye nabasebenzi basensimini. Inhloso ngemuva kokubhekwa kwekhamera ukukhulisa ukusebenza kahle kwezokuphepha, ukuhlala uqaphile kubasebenzi basensimini. Ngokusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngabezokuphepha nabasebenzi basensimini inkampani ifuna ukulandela izinhloso:
Iqinisekisa imithetho yezokuphepha
Kugcina abantu abangenacala kanye nabantu abangagunyaziwe kude negunya lendawo kawoyela
Iqapha abasebenzi ukuthi bayayilandela yini imithetho yenkampani noma cha
Uthola isithombe sensimu yokukhiqiza igesi
Kubhekwa ukukhohliswa kwezinto ezingcolile
Unaka izinto ezingcolile
Ivumela ukubukwa kweselula kokubeka iso kusayithi
By ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba kwinkonzo yezokuhlanzeka, izimo zangaphakathi zamanzi okuhambisa indle nemizila yensizakalo yokuhlala zingabhekwa futhi zihlolwe ngenkathi kufakwa izithombe ngesikhathi sangempela. Uzokhomba izinkinga ezahlukahlukene kanye nemvelo yazo ngokushesha.
Isibonelo, i-CASA Sanitary Wares Factory, eCanada yanikeza amakhamera agqokwa ngomzimba kochwepheshe bayo nakwabanye abasebenzi ngesikhathi somsebenzi wabo. Basebenzise amakhamera agqokwa uMzimba kulokhu okulandelayo:
Ngokusebenzisa ama-BWCs ngesikhathi sokuhlola umugqa we-mainline, kwakufanele aqoqe idatha eseqophelweni eliphezulu engasungulwa futhi inikeze ukusondelana kwendawo okubhekiswe kuyo. Ngemuva kokuhlola, banikeza umbiko obhaliwe nevidiyo enezinqumo eziphezulu. Ekupheleni kosuku, bakhipha idatha ewusizo ebingenakwenzeka ngaphandle kokusebenzisa ubuchwepheshe bamuva.
Ngendlela efanayo, ukuhlola okwakusetshenziswa kwakamuva kwakusetshenziswa ngamakhamera agqokwa uMzimba. Ngemigqa yokuhambisa indle exhuma izindlu namabhizinisi nohlelo lokuhambisa indle oluphakathi nendawo. Lokhu kuhlola kunikeze isu elisebenzayo ukubheka ama-blockages, ama-bores we-cross noma ukulimala. Ngokuboniswa kwekhamera okugqokwa uMzimba, bethule umbiko osebenzayo kuma-blockages, bores cross kanye nomonakalo.
Ukulondolozwa kwe-manhole elifanele kubalulekile ekusebenzeni kohlelo lokuqoqa. Le nkampani inabasebenzi abahlolile futhi bahlola inqwaba yezingqalasizinda ezingcwatshwe kufaka phakathi ama-manholes njll ngokusebenzisa amakhamera agqokwa uMzimba. Banikeze ubufakazi bevidiyo bokuhlolwa kwabo ngosizo lwamakhamera agqokwa ngomzimba.
Ngakho-ke, izinsizakalo zokuhlanzeka seziqale nokuncika kumakhamera agqokwa ngumzimba ukuze andise ukusebenza kwawo kahle.
lwezezimali Izinhlangano ezinjengamabhange zithathwa njengezikhungo ezivikelwe kakhulu emhlabeni. Siphathisa imali yethu, ubucwebe kanye nemibhalo ebalulekile ngokuncika kuyo. Ngakho-ke, uhlelo lokubheka amavidiyo we-notch ephezulu lubalulekile kulezi zikhungo zezezimali. Ngokuqanjwa kwamanje kobuchwepheshe bedijithali kanye nokuqashelwa kwe-IP, amabhange amaningi abheke ukukhulisa ukusebenza kahle kwezinhlelo zawo zokuphepha ngokutshala kule teknoloji entsha.
Izinzuzo zamakhamera agqokwa ngomzimba eBanks nakwezinye izikhungo zezezimali:
Amabhange ayaqhubeka nokuqondiswa izigebengu ezifuna ukukhokhelwa enkulu. Ukusethwa kokubhekisisa okwenziwe yikhamera efanele yasebhange kungasiza ekuvimbeleni ukuphanga.
Esimweni sokuphanga kanye nokukhwabanisa okugqokwa okugqoke amakhamera okugqokwa komzimba kungasetshenziswa ukuthola abasolwa.
Amakhamera agqokwa ngomzimba kanye nezinhlelo zokubuka ikhamera zeCCV ezinama-analytics wevidiyo athuthukile njengokuqashelwa kobuso kuyasiza ukubhekana nenkinga yokuhlola ukukhwabanisa emabhange ngokurekhoda idatha yokuthengiswa kanye nokuthumba izithombe zezigebengu. Lolu lwazi luwusizo ukuqaphela izigebengu futhi zisiza ekuvikeleni ama-akhawunti wamakhasimende.
Amakhamera agqokwa ngomzimba angakhulisa ukuzethemba kwamakhasimende ebhange. Lapho ibhange livikeleke kakhulu, amakhasimende athembela ngokwengeziwe azoba. Uhlelo olusebenzayo lokubhekwa kwevidiyo yasebhange ngokusebenzisa amakhamera agqokwa ngumzimba kanye namakhamera we-CCTV afakazela usizo olukhulu.
Amakhamera agqokwa ngomzimba babe yingxenye yawo wonke umnyango. Cishe yonke imboni izama ukuyivumelanisa nezimo zokubhekwa kwabasebenzi bayo.
Ngendlela efanayo, izinkampani zomshuwalense zivame ukuzama ukusebenzisa ukuqoshwa kwevidiyo eyathathwa ngaleso sikhathi sesigameko ukufakazela noma ukungavumi ukuthwala umthwalo wemfanelo, futhi bayoze bame kakhulu nokuzama ukusebenzisa ukuqoshwa kwevidiyo yomuntu ekhaya lakhe noma ezindaweni zomphakathi ukufakazela ukuthi umuntu umhlukumeza ngokweqile ukulimala kwakhe. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwekhamera yomzimba kusindisa imali eningi ezinhlanganweni ngoba amakhamera omzimba anikeza ubufakazi bokuthi lo msebenzi unelungelo lokunikeza imali yomshuwalense noma cha. Yilokhu izinkampani zomshuwalense ezigcizelela ekusetshenzisweni kwamakhamera omzimba.
Phakathi kokunye ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngumzimba, uma uvumela ukunikeza i-akhawunti, inkampani yomshuwalense ingayenza i-footage yayo futhi mhlawumbe ikusebenzise ngokumelene nawe esikhathini esizayo. Ngokufanayo, kwenzeka okufanayo emihlanganweni yomuntu siqu lapho umhambisi womshuwalense engahlelela imihlangano yomuntu siqu ngethemba lokuthi uzokufaka ekuthini usho okuphikisana nesimangalo sakho. Ngakho-ke, akufanele wenze isitatimende noma uvume umhlangano ngaphandle kokuxoxisana nommeli wakho kuqala.
Imisebenzi Yezakhiwo Nezindawo:
Ukusetshenziswa Kwezingubo zomzimba Amakhamera nawo ayasiza njengoba kwenzeka nakwezinye izimboni. Isibonelo, u-Annie Yee osebenzela inhlangano ye-Real Estate, wake wabona isimo esingesihle ehhovisi lakhe ukuthi omunye wabathengi wazama ukumhlukumeza ngokocansi. Isimo lesi, wasifakaza yize zikhona izindlela zokuphepha, wafuna ukuthi kusetshenziswe amakhamera agqokwa uMzimba emahhovisi ezinhlangano zeReal Estate. Hhayi ukuthi kuyasiza ukugwema izehlakalo ezinjengeka-Annie Yee kodwa futhi nenhlangano ingabheka kakhulu imisebenzi eminingi yabasebenzi kanye nabathengi.
Silandisa isibonelo sika-Annie Yee lapha ukugcizelela ukubaluleka kokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba. Kwakuyinyanga ka-Okthoba lapho naphezu kwazo zonke lezo zindlela zokuphepha, wayenomuzwa wokucwila ngenkathi esongela ngenkathi ehlangana nomuntu okhombisa impahla. Ikhasimende lahlangana naye isikhathi eside. U-Annie wazizwa engakhululekile futhi wezwa amacebo akhe amabi amenzela wona. Kamuva, baphuma ehhovisi bayobona impahla. Bangena esakhiweni esingenamuntu. Wayecophelela ngokwanele ukuthi aqhubeke nokuhamba ngemuva kwakhe futhi wayegwema izindawo zasekhaya lapho ayengambopha khona. Ngaleso sikhathi, wangena egumbini. Ngenkathi engena egumbini lalowo muntu wamxosha wangena egumbini kodwa umenzeli wesifazane wenqaba ukugcizelela kwakhe. Umuntu weqa ibhulukwe lakhe walala embhedeni. U-Annie Yee wathi ukukhombisa kwanele futhi wasuka ngokushesha egumbini. Utshele amaphoyisa ngaso leso sikhathi futhi kwasho uphenyo. Ngokwemibiko yezindaba, wakhonjwa igama nguMichael Beat. Ubhekene necala lokuziphatha okubi, ukuzama ukuhlukumeza ngokocansi okwesithathu, ukuphazamisa ukuthula.
Lesi sehlakalo sinikeza isifundo esihle sokuthi ukusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba kubalulekile embonini yezakhiwo nabasebenza kuwo bonke impahla.
Kule ngxoxo, sizamile ukuhlola ukubaluleka kwamakhamera agqokwa ngomzimba ngemiphumela yezifundo ezahlukene kanye nokwenza ucwaningo. Amagama ethu wokuvala yikhamera egqokwa ngumzimba iyithuluzi lakamuva elikhulisa ukusebenza kwenhlangano ngokuqinisa ukusebenza kahle kwezokuphepha, nokwethenjwa kwamakhasimende.
Ukusetshenziswa Kwamakhamera Omzimba Ozelwe Yizimboni igcine ukuguqulwa: Okthoba 10th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3427 Ukubuka kwe-1 Namuhla